Maxaa ka jira in Arsene Wenger uu doonayo in uu tababare u noqdo kooxda Manchester United? - BBC News Somali
Maxaa ka jira in Arsene Wenger uu doonayo in uu tababare u noqdo kooxda Manchester United?
Image caption Arsen Wenger
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal, Arsene Wenger oo horay uga tegay kooxdaas kadib markii uu ku guuldareystay in wax guul ah uu usoo hoyo kooxdaas dhowr sano ayaa wareysi uu siiyay telefishenka Bein Sport waxaa uu kaga hadlay in uu doonayo in markale uu dib ugu soo labto shaqadii tababaranimada ciyaaraha kuabada cagta.
Inkastoo Arsene Wenger uusan si toos ah ugu lug laheyn ciyaaraha ayaa hadana muddooyinii dambe waxaa uu ahaa fallanqeeye dhanka ciyaaraha, oo waxaa ka soo muuqday Telefeishenada baahiyay ciyaaraha.
Dhawaan ayuu carabka ku dhufta in uu daneynayo in uu dib ugu soo laabto ciyaaraha, isagoona soo jeediyay talooyin ku aadan kooxda Manchester United ee uu loolanka ka dhaxeeyay in mudo ah.
"In tababare laga noqdo kooxda Manchester United waa riyada qof walba oo tababare ah, ugu yaraan tababare walba oo leh dhiiranaan iyo kalsooni , United waxaana u arkaa inay tahay koox wax iska caabin karta, mana ahan sida dadka ay u maleeyaan " . Sidaas waxaa telefishenka ciyaaraha ee Bein Sport u sheegay Arsene Wenger.
Kooxda Manchester ayuu sidoo kale sheegay inay u baahan tahay ciyaartoy wax ku ool ah, iyo tababare wax kusoo kordhiya.
Lahaanshaha sawirka Bein Sport
Image caption Wenger ayaa fallanqeeya ka ah telefishenka Bein Sports ee laga leeyahay dalka Qatar
Mar wax laga weydiiyay in uu daneynayo in kooxda Manchester United uu tababare ka noqdo ayaa waxaa uu sheegay in aysan waxba ku jabneyn.
"Sida aan horay u sheegay ba, kooxda Manchester United waa riyada tabababre walba, aniguna waan isku kalsoonahay, dabcan haa oo talooyin badan ayaa hayaa", ayuu raaciyay.
Wargeyska The Mirror Sport ayaa kusoo warramay in Wenger uu sidoo kale aqbalay in uu qeyb ka noqdo guddi farsamo oo la shaqeeya xiriirka kubada cagta adduunka ee FIFA.
69 jirkan ayaa u muuqda in uu daneynayo in uu wali kusii nagaado maamulka ciyaaraha kubada cagta, inkastoo hadana la sheegay in uu aqbalay dalabka cusub.
Walow aan la fahfaahinin waxyaabaha looga baahan yahay shaqada uu qaban doonaa ayaa hadana waxaa la sheegay in FIFA ay dooneyso inay ka faaideysato aqoonta iyo khibrada uu leeyahay.
Wenger ayaa tan iyo intii uu ka tagay kooxda Arsenal, waxaa uu fallanqeeya dhanka ciyaaraha ka ahaa telefishenka Bein Sports ee laga leeyahay dalka Qatar ee baahiya ciyaaraha, waxaana uu dhowr jeer bogaadiyay teknoljiyadda loo adeegsada ciyaaraha, si looga hortago khaladaadka.